Iindaba - i-e-LinkCare yaya kwi-2017 ERS ye-International Congress eMilan
I-e-LinkCare iye kwi-2017 ERS yamazwe aphesheya eMilan
I-ERS ikwabizwa ngokuba yi-European Respiratory Society ibambe i-2017 yayo yeNkongolo yamazwe aphesheya eMilan, e-Itali ngoSeptemba.
I-ERS yamkelwe njengeyona ntlanganiso inkulu yokuphefumla emhlabeni njengoko ibiyiziko elibalulekileyo lezenzululwazi eYurophu. Kwi-ERS yalo nyaka, bekukho izihloko ezininzi ezishushu ezixoxwayo ezinje ngononophelo olunzulu lokuphefumla kunye nezifo zomoya.
I-e-LinkCare ibonwabile kunye nabangaphezulu kwe-150 abathathi-nxaxheba abazimase lo msitho ukusuka nge-10 kaSeptemba kwaye babonisa i-e-LinkCare itekhnoloji yamva nje ngokubonisa i-UBREATH TM iimveliso zokhathalelo lwemveliso yokuphefumla kwaye batsala ngempumelelo iindwendwe ezininzi.
Iinkqubo ze-UBREATH TM Spirometer Systems (PF280) kunye (PF680) kunye ne-UBREATH TM Mesh Nebulizer (NS280) yayiziimveliso ezintsha ezaziswa kwihlabathi okokuqala ngqa, zombini zifumene ingxelo entle ngexesha leseshoni yomboniso, iindwendwe ezininzi zibonise umdla wazo kunye utshintshe abafowunelwa ngamathuba oshishino anokubakho.
Ngokubanzi, yayingumsitho ophumeleleyo kwi-e-LinkCare ababezimisele ukuba yinkampani ephambili kolu shishino. Ndiyathemba ukukubona kwi-2018 ERS congress yamazwe aphesheya eParis.
Ikhithi yokuSimahla yeSwekile yeGazi, IPneumotachograph Spirometer, Iswekile Khangela uMatshini kweyona nkampani, Umatshini wovavanyo lweSwekile yegazi, 5.2 Igazi leswekile, Ukuzila ukutya kweGazi leShukela 100,